Uphi umphathi wemisebenzi ku-Mac? | Ngivela kwa-mac
Uphi umphathi wemisebenzi?
UJordi Gimenez | | I-Mac OS X, Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac, Izifundiswa
Elinye lamathuluzi abasebenzisi beMac abasebenzisa kakhulu i I-OS X Umsebenzi Wokuqapha. Abasebenzisi abaningi abeza ku-OS X bavela ku-Windows futhi leli thuluzi yilona esingaliqhathanisa ne- "Task Manager" eyaziwa futhi esetshenziswa kakhulu ehlanganiswe nohlelo lwe-Windows. Yebo, kumayelana nokukwazi ukubona ukusetshenziswa komshini wethu ngokuya ngehardware yangaphakathi: amaphesenti wokusetshenziswa kwe-CPU, iMemori, Amandla, iDiski kanye neNethiwekhi.
Lapho sikhuluma nge-Activity Monitor ku-OS X sikhuluma ngokuba nokulawula izinqubo zethu kwi-Mac futhi lokhu ngokungangabazeki kuyabathakazelisa kakhulu abanye abasebenzisi. Ngamafuphi, nakithi sonke ebesisebenzisa iWindows iminyaka eminingi, kuyilokho uzoba yi-Task Manager eyethulwa lapho senza inhlanganisela i- "Ctrl + Alt + Del", kepha kwi-Mac OS X ibizwa nge-Activity Monitor futhi kulula ukuyethula ngoba inesicelo sayo ngaphakathi kweLaunchpad yethu, esivumela ukuthi siyivule kusuka I-Launchpad uqobo, kusuka ku-Spotlight noma naku-Finder kufolda Yezicelo. Sizobona imininingwane eminingi ngalokhu Umsebenzi Wokuqapha namasu amancane ewafihlayo.
1 Ungayivula kanjani i-Activity Monitor
2 Imininingwane yomphathi womsebenzi ku-Mac
Ungayivula kanjani i-Activity Monitor
Yebo, uma usufike lapha kungenxa yokuthi umane ufuna ukwazi yonke idatha yokusetshenziswa kwe-Mac yakho entsha.Ngivele ngishilo ekuqaleni ukuthi sinezinketho ezahlukahlukene zokuvula le Activity Monitor kepha into enhle kakhulu uma sizokwenza lokhu yisebenzise kakhulu futhi wenze ukufinyelela okulula ngokwengeziwe, esikweluleka ngakho ukuthi ugcine i-Activity Monitor yakho endaweni efinyeleleka kalula ukubona idatha nezinqubo nganoma yisiphi isikhathi. Lokhu kulula kakhulu ukukwenza futhi kufanele ufinyelele kuphela kusuka ku- I-Launchpad> Ifolda yabanye> Umsebenzi Wokuqapha bese uhudulela uhlelo lokusebenza ethekwini.
Ungafinyelela futhi kumqapha womsebenzi usebenzisa i-Spotlight noma ngaphakathi kwe-Applications> Utilities folder. Noma iyiphi yalezi zindlela ezintathu iyakusebenzela.
Ngale ndlela i-Activity Monitor izobe ifakwe e-Dock futhi ngeke usadinga ukufinyelela ku-Launchpad, Spotlight noma i-Finder, kuzochofoza kube kanye ngqo futhi sizokwazi ukufinyelela ngokushesha okukhulu futhi kalula lapho sihlala phambi iMac. isivumela ukufinyelela "izinketho ezifihlwe kakhulu" yalesi Senzo Sokuqapha esizokubona esigabeni esilandelayo.
Imininingwane yomphathi womsebenzi ku-Mac
Akungabazeki ukuthi lesi sizathu sale ndatshana. Sizobona yonke imininingwane esinikezwa yi-Activity Monitor futhi ngalokhu sizohlonipha ukuhleleka kwamathebhu avela kuleli thuluzi le-OS X eliwusizo. inkinobho ene «Mina» lokho kusinikeza imininingwane ngenqubo ngokushesha futhi indandatho yegiya (uhlobo lokusetha) engxenyeni engenhla esisinikeza ongakhetha kukho: inqubo yokwenza isampula, ukusebenzisa i-espindump, ukusebenzisa ukuxilongwa kwesistimu nokunye.
Ingxenye yalezi zinketho ezifihliwe esikhulume ngazo ekuqaleni kwendatshana kuyindlela yokushiya isithonjana sedokhu sicindezelwe, singakushintsha ukubukeka kwayo bese sengeza iwindi kumenyu yezinhlelo zokusebenza lapho igrafu yokusetshenziswa izovela khona. Ukuguqula isithonjana sohlelo lokusebenza futhi ubone izinqubo ngqo okufanele sikwenze bamba isithonjana sedokhu> Isithonjana sedokhi bese ukhetha lokho esifuna ukukuqapha ngokufanayo.
Lokhu ndawonye neMemoria akungabazeki ukuthi yisigaba esisetshenziswa kakhulu yimina nokuthi kusitshengisa ini iphesenti lokusetshenziswa kohlelo lokusebenza ngalunye olusebenzayo. Ngaphakathi kohlelo lokusebenza ngalunye singenza imisebenzi ehlukene njengokuvala inqubo, ukuthumela imiyalo nokuningi. Ngaphakathi kwenketho ye-CPU sinemininingwane ehlukahlukene etholakalayo: Amaphesenti we-CPU asetshenziswa uhlelo ngalunye, isikhathi se-CPU sezintambo, Ukwenza kusebenze ngemuva kokungasebenzi, i-PID nomsebenzisi owenza lolo hlelo emshinini.
Ngaphakathi kokukhethwa kukho iMemori singabona idatha ehlukile futhi ethakazelisayo: imemori esebenzisa inqubo ngayinye, inkumbulo ecindezelwe, i-Threads, i-Ports, i-PID (iyinombolo yokukhomba yenqubo) nomsebenzisi owenza lezi zinqubo.
Akungabazeki ukuthi leli elinye iphuzu okufanele ulicabangele uma sisebenzisa iMacBook ngoba isinikeza ukusetshenziswa kwenqubo ngayinye ukuthi sinezimpahla ku-Mac. Le thebhu ye-Energy isinikeza imininingwane ehlukile enjengale: umthelela wamandla wenqubo, umthelela wamandla omaphakathi, noma ngabe uyayisebenzisa noma cha Uhlelo lokusebenza Nap (I-App Nap isici esisha esifike ku-OS X Mavericks futhi yehlisa ngokuzenzakalela izinsiza zohlelo kuzinhlelo ezithile ezingasetshenziswa njengamanje), Vimbela ukungena ngemvume nokungenzi lutho komsebenzisi.
Yazi kumunwe ukuthi ikhiqizelani Ukufunda nokubhala ibaluleke ngokwengeziwe ngenxa yokushesha kwama-SSD amanje. Lawa madiski aqukethe i-Flash memory futhi ngokuqinisekile ashesha ngokuphindwe kabili kunama-HDD disc, kepha futhi "ashesha ngokushesha" lapho efunda futhi ebhala kakhulu. Kukhetho lweDiski le-Activity Monitor sizobona ama-Byte abhaliwe, ama-Byte afundwayo, isigaba, i-PID kanye nomsebenzisi wenqubo.
Lokhu kungokugcina kwamathebhu ahlinzekwa yi-Activity Monitor ephelele ku-OS X. Kuyo sithola yonke idatha ebhekise ekuzulazulweni kwemishini yethu futhi singabona imininingwane ehlukile yenqubo ngayinye: Amabhayithi athunyelwe nama-Byte atholakele, amaPakethe athunyelwe namaphakethe atholiwe kanye ne-PID.
Ekugcineni imayelana thola ulwazi ngazo zonke izinqubo ukuthi iMac yethu iyenza, kufaka phakathi leyo yeNethiwekhi, futhi ukwazi ukuyivala noma uqaphele amaphesenti asetshenziswa ezinye izinhlelo zokusebenza nezinqubo ku-Mac yethu. Futhi, lapho unenketho yokuguqula isithonjana sedokhi ukuze ubone imininingwane ye-Activity Monitor ku isikhathi sangempela kuhle ukuthola okungajwayelekile noma ukusetshenziswa okungajwayelekile. Futhi ukuba nakho konke okunegrafu ewindini uqobo kusiza imininingwane yawo wonke amaphuzu.
Impela le Activity Monitor yenza kube lula ngathi ukuthola inqubo ebisikhathazile kanye nenketho esivumela ukuthi siyivale ngqo ukusuka lapho, yini kwenza umsebenzi ube lula kumsebenzisi. Ngakolunye uhlangothi, ngokuqinisekile abangaphezu koyedwa wabasebenzisi abavela kuhlelo lokusebenza lweWindows basebenzise ukwenza inhlanganisela yokhiye we-Ctrl + Alt + Del ukubona i-Task Manager futhi nakanjani ku-Mac OS X le nketho ayikho.
Okucacayo ukuthi uma uvela kwiWindows, kufanele ukhohlwe ngomphathi wemisebenzi yakudala ngoba ku-Mac ibizwa nge- "Activity Monitor". Ngokushesha ukujwayela, kungcono, ngoba lokhu kuzokonga isikhathi sokufuna uhlelo lokusebenza olungekho ku-MacOS.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac » Uphi umphathi wemisebenzi?
njengokuhlala kwenzeka i-mac ikwenza kangcono kunamawindi
U-Alejandra Solorzano M kusho
Sawubona, ngidinga usizo, angazi ukuthi ngingazithola kanjani lezi zinketho ezimbili zohlelo lokusebenza lwe-mac. Ngidinga usizo. Ungangisiza?
Ukuphathwa kwedivayisi ye-Mac
Phendula u-Alejandra Solorzano M
Ngidinga abaphathi beletha mac
I-BioShok Remastered izokhishwa ngasekupheleni konyaka i-macOS
Nikeza ukusha nobuhle ku-Apple Watch yakho